I-china Thrust Ball Bearings abakhiqizi nabaphakeli | Xinri
I-unidirectional thrust ball bearing ne-bidirectional thrust ball bearing ingahlukaniswa ngokuya ngengcindezi. Ukuthwala ibhola okungagunyaziwe kungathwala umthwalo we-axial unidirectional. I-Bidirectional thrust ball bearing, ekwazi ukuthwala umthwalo we-axial bidirectional, lapho iringi ye-shaft ilingana khona ne-shaft. Ubuso obukhuphukayo bendandatho yesihlalo bunobubanzi obuyindilinga, obunokusebenza kokugxila futhi kunganciphisa ithonya lephutha elikhulayo. I-Thrust ball bearing ayikwazi ukuthwala umthwalo osabalalayo, isivinini somkhawulo siphansi.
I-Thrust ball bearing yakhelwe ukumelana nomthwalo wokugijimisa ngejubane elikhulu futhi yakhiwe yindandatho emise okwe-gasket enendawo yokudonsa ibhola. Ukufakwa kwebhola lokugxila kuhlukaniswe ngezinhlobo ezimbili, uhlobo oluyisisekelo oluyisicaba nohlobo oluzivumelanisa noluyindilinga, ngoba indandatho iboshelwe. Ngaphezu kwalokho, ukuthwala kungamelana nemithwalo ye-axial, kepha hhayi imithwalo ye-radial.
Ngokungeziwe kumabherethi akulesi sigaba, i-XRL inikezela ngamabheringi ebhola lezidingo ezikhethekile zohlelo lokusebenza. Lokhu kufakwa okunezinhlobonhlobo kufaka phakathi amabheringi ane-Solid Oil ne-NoWear camera.
● Iyahlukaniswa futhi iyashintshana
Izingxenye ezihlukaniswayo ze-XRL thrust ball bearings ziyashintsha. Lokhu kusiza ukukhuphuka nokuhliswa, nokuhlolwa kokugcinwa.
● ukungahambi kahle kokuqala
Amabhere anezindlu ezi-sphered angakwazi ukwamukela ukungahanjiswa kahle kokuqala.
Ama-washer we-shaft anebhola lomhlaba ukuze kuvunyelwe ukuphazamiseka okulungile. I-bore ye-washer yezindlu iyaguqulwa futhi ihlale inkulu kune-shaft washer bore.
● Kutholakala ngendlela eyodwa nangezindlela ezimbili
● Ukuvumela amaphutha wokukhuphuka, aqonde ohlangothini olulodwa noma abe mabili, ungakhetha uhlobo oluyindilinga lozenzele oluyindilinga noma olunohlobo lwendandatho yesihlalo esiyindilinga
● Izinga eliphakeme lobuchwepheshe begrisi
● Ibhola lensimbi eliphakeme - libushelelezi futhi lithule ngejubane elikhulu
● Ukusebenzisa iringi kokukhethwa kukho, iphutha lokufaka livunyelwe
Kusebenza kuphela ezingxenyeni zomshini ezithwala umthwalo owodwa we-axial nejubane eliphansi, njenge-crane hook, ipompo eqondile, i-centrifuge eqondile, i-jack, isivinini sokunciphisa isivinini, njll. ingafakwa futhi isuswe ngokwehlukile.
SIZE Ubukhulu UKULINGANISWA KOMTHWALO Umkhawulo wokulayisha ukukhathala Izilinganiso ezisheshayo
d [mm] D [mm] H [mm] H1 [mm] C [kN] C0 [kN] I-Pu [kN] [r / iminithi] [r / iminithi]
Langaphambilini Isondo Hub Amabombo
Olandelayo: Needle Roller Bearings
ukhololo wafaka ibhola eliqukethe
indiza eya ngakunye yafaka ibhola ethwele
uhlobo oluphezulu lokuthengisa oluthinta ibhola